Imfazwe ye-1 neye-2 ye-Opium: IBrithani ngokuchasene neChina
Imfazwe yokuqala ye-Opium yalwa kusukela ngoMatshi 18, 1839 ukuya ku-Agasti 29, ngo-1842 kwaye yaziwa ngokuba yiMfazwe yokuqala ye-Anglo-Chinese. Amabutho aseBritani kunye nama-18,000 aseShayina abulawe. Ngenxa yemfazwe, iBrithani yafumana amalungelo okurhweba, ukufikelela kumachwebeni amahlanu omnqophiso kunye neHong Kong.
I-Second Opium War yalwa kusukela ngo-Oktobha 23, 1856 ukuya ku-Oktobha 18, ngo-1860 kwaye yaziwa ngokuba yiMfazwe ye-Arrow okanye iMfazwe yesiBili yesiNgesi, (nangona iFransi ingena). Amalunga ama-2 900 aseNtshona abulawa okanye awonzakele, ngelixa i-China yayineminyaka engama-12 000 ukuya ku-30 ​​000 yabulawa okanye yalimala. IBrithani inqobe i-Kowloon yasemazantsi kunye namagunya aseNtshona afumana amalungelo asemthethweni kunye namalungelo okurhweba. Iintlanga zaseTshayina zaseNtshonalanga zatshitshiswa zitshiswa.
Imvelaphi kwii-Opium Wars
I-British East India Inkampani kunye neQing yaseShayina iifom ye-Opium Wars eChina. Chrysaora kwiFlickr.com
Ngama-1700, iintlanga zaseYurophu ezifana neBrithani, iNetherlands kunye neFransi zifuna ukwandisa amanxibelelwano abo aseAsia ngokuxhuma kunye nemithombo emikhulu yeemveliso ezigqityiweyo ezigqibeleleyo-i-Powerful Qing e-China. Kwiminyaka engaphezu kwewaka, iChina yayisiphelo sempuma yeSilik Road, kunye nemvelaphi yezinto eziphathekayo zokunethezeka. Iinkampani zaseYurophu zokuthengiswa kwamashishini, ezifana ne- British East India Inkampani kunye ne-Dutch East India Inkampani (i-VOC), babenomdla wokubheka indlela yabo yokutshintshiselana.
Kodwa abahwebi baseYurophu babenengxaki ezimbalwa, nangona kunjalo. I-China iyanciphisa kwi-port yaseCanton, ayizange ivumele ukuba bafunde isiTshayina, kwaye babesongela izigwebo ezinzima nakwiyiphi na iYurophu eyazama ukushiya idolophu yesango kunye nokungena eChina. Okubaluleke kunabo bonke, abathengi baseYurophu babeduka ngama-silk, ama-porcelain kunye ne-tea, kodwa iChina ayifuni nantoni na nayiphi na impahla yaseYurophu eyenziweyo. IQing ifuna ukuhlawulwa ngokubanda, imali enzima - kule ngxowa, isilivere.
Ngokukhawuleza iBrithani ibhekene nobunzima bezohwebo kunye neChina, njengoko kwakungenayo isilivere yasekhaya kwaye kwafuneka kuthenge yonke isilivere yayo eMexico okanye kumandla aseYurophu eneemigodi zesiliva zesilivere. Ukukhula kweBritani okwenziwe itiye, ngokukodwa, kwenza ukungalingani kwamashishini kunzima kakhulu. Ekupheleni kwekhulu le-18, i-UK yayithengisa ii-toni ezili-6 zeTayiti ngonyaka. Ngesiqingatha sekhulu leminyaka, iBritani yakwazi ukuthengisa i-£ 9m yezinto zaseBrithani ezithengiswayo kwiiTshayina, ngokuchithwa ngama-£ 27m kwiiShayina ezingeniswayo. Ukwahlukana kwahlawulwa ngesiliva.
Nangona kunjalo, ekuqaleni kwekhulu le-19, iNkampani yaseBritish East India yathatha uhlobo lwesibini lokuhlawula olungekho mthethweni, kodwa lwamkelekile kubahwebi baseTshayina: i- opium evela eBritish India . Le mpahla, eyakhiwe ngokuyinhloko eBengal , yayomelele kunomhlobo osetyenziswa ngamayeza aseTshayina; Ukongeza, abasebenzisi baseTshayina baqala ukutshaya i-opium kunokuba badle i-resin, evelise phezulu. Njengoko ukusetyenziswa kunye nomlutha wenyuka, urhulumente waseQing wakhula wakhathazeka ngakumbi. Ngokomlinganiselo othile, amaninzi angama-90% wabantu abesilisa abaselunxwemeni lwaseChina basempumalanga babesilumkile ukutshaya i-opium ngama-1830. Ibhalansi yokurhweba iguqulwa eBrithani, ngenxa yokuthungelwa kwe-opium engekho mthethweni.
Imfazwe yokuqala ye-Opium
Umkhumbi waseBrithani uNomesis walwa namaJunks ngexesha le-First Opium War. E. Duncan nge-Wikipedia
Ngomnyaka we-1839, uMlawuli waseChina waseDaoguang wanquma ukuba wayenele ngokwaneleyo ukusetyenziswa kweziyobisi zaseBrithani. Wamisela igosa elitsha iCanton, iLin Zexu, eyayizingqelela abashushu abashumi nantathu baseBrithani ngaphakathi kwendawo yokugcina impahla. Xa bazinikela ngo-Ephreli ka-1839, iRhumeli yase-Lin yathatha iimpahla ezibandakanya ii-42,000 iipipi ze-opium kunye nama-20,000-iipiliti zeephipi ze-opium, kunye nexabiso lezitalato ezingama-£ 2 yezigidi. Walawula ukuba iifubeni zifakwe emanqeni, zifakwe i-lime, kwaye zatsho amanzi olwandle ukuze zonakalise i-opium. Inomsindo, abahwebi baseBrithani baqalisa ukucela uncedo lwaseburhulumenteni waseBrithani.
NgoJulayi waloo nyaka yabona isiganeko esilandelayo esandula ukuxhatshazwa phakathi kweQing neBrithani. Ngo-Julayi 7, 1839, abadliwayo baseBrithani nabaseMelika bevela kwiinqanawa ezili-opium clipper ezixutywa kwidolophana yaseChien-sha-tsui, eKowloon, babulala indoda yaseTshayina baze bachithe ithempeli lobuBuddha. Ekuvukeni kwesi siganeko se "Kowloon," izikhulu ze-Qing zafuna ukuba abantu basemzini bavule abantu abanetyala ukuba bavivinywe, kodwa iBritani yavuma, icacisa inkqubo yezomthetho eyahlukeneyo yaseChina njengesiseko sokwenqaba. Nangona ulwaphulo-mthetho lwenzeka ngomhlaba waseTshayina, kwaye lwaba nexhoba laseTshayina, iBritani yathi abagibeli bamalungelo banelungelo lokufuduka kwamalungelo.
Abanqwelwana abathandathu bavalelwa enkundleni yaseBrithani eCanton. Nangona babetyala, bakhululeka ngokukhawuleza xa babuyela eBrithani.
Ekuvukeni kweNgxaki yaseKowloon, amagosa ase-Qing athi akukho british okanye abanye abathengisi bangaphandle baza kuvunyelwa ukuba bathengise neChina ngaphandle kokuba bavumelane, phantsi kwentlungu yokufa, ukuthobela umthetho waseTshayina, kubandakanywa nokukhangela urhwebo lwe-opium, kwaye ngokwasemthethweni kolawulo lwaseTshayina. I-Superintendent yaseBrithani yezoRhwebo eChina, uCharles Elliot, yamphendula ngokumisa yonke intengiso yaseBrithani kunye neChina kwaye iyala iinqanawa zaseBritani ukuba zihoxise.
Imfazwe yokuQala i-Opium Iphule
Ngokugqithisileyo, iMfazwe yokuqala ye-Opium yaqala nge-squabble phakathi kweBrithani. Inqanawa yaseBrithani uThomas Coutts , abanikazi bayo be-Quaker babesoloko bechasene ne-opium ukuthungisa, bahamba baya eCanton ngo-Oktobha ka-1839. Umphathi wekhuphe wasayina isibophelelwano sezomthetho saseQing waza waqala ukuhweba. Ngempendulo, uCharles Elliot wayala iRoyal Navy ukuba ikhusele umlomo wePearl River ukukhusela nayiphi na iinqanawa zaseBrithani ukungena. NgoNovemba 3, umthengisi waseBrithani uRoyal Saxon wasondela kodwa iinqwelo zeRoyal Navy zaqala ukudubula kuyo. I-Qing Navy junks yayisondeza ngaphandle ukukhusela iRoyal Saxon , kwaye ekugqibeleni iMfazwe yokuqala yeCheunpee, iBrithani yeNavy yaseBrithani yayidla iinqanawa ezininzi zaseTshayina.
Kwakuyintlahlela yokuqala kwintambo emide yokutshatyalaliswa kwintlekele ye-Qing amandla, eya kuphelelwa yimfazwe kwiBritani kokubili olwandle nakwimhlaba kwiminyaka emibini nesiqingatha ezayo. AmaBrithani athatha iCanton (Guangdong), iChusan (iZhousan), i-Bogue amakhulu emlonyeni wePearl River, i-Ningbo ne-Dinghai. Ephakathi kowama-1842, iBritani nayo yathatha iShanghai, ngaloo ndlela ilawula umlomo weMlambo waseYangtze. Ehlekile kwaye ehlazisiwe, urhulumente waseQing wayefanele axolise uxolo.
Ngo-Agasti 29, 1842, abameli be- Queen Victoria wase-Great Britain kunye noMlawuli waseTshayina waseDaoguang bavuma isivumelwano soxolo esasibizwa ngokuthi iSivumelwano saseNanking. Esi sivumelwano sibizwa ngokuba ngu-First Unqual Treaty, kuba iBrithani iphumelele ukunikezelwa kwamanani amakhulu kwiiTshayina ngelixa linganiki nto ngaphandle kokuphela kokuxabana.
ISivumelwano saseNanking savula amachweba amahlanu kubathengisi baseBrithani, kunokuba bafune ukuba bonke bathengise kwiCanton. Kwakhona kwanikezela ngezinga elingu-5% lomrhumo ekuthengisweni kweChina, okuvunyelwene ngabaphathi baseBrithani nabamaQing kunokuba babekwe yiChina kuphela. IBrithani yanikelwa "isizwe esithandekayo", kwaye abemi bayo banikezelwa amalungelo angaphandle. I-consuls yaseBrithani inelungelo lokuthetha ngokuthe ngqo kunye namagosa asekuhlaleni, kwaye onke amabanjwa aseBrithani akhululwa. I-China nayo yadibanisa isiqithi saseHong Kong ukuya eBrithani ngokuqhubekayo. Ekugqibeleni, urhulumente waseQing wavuma ukuhlawula ukulwa kwemfazwe eyi-21 yezigidi zesilivere zesilivere kule minyaka emithathu elandelayo.
Ngaphantsi kwesi sivumelwano, i-China yahlupheka ubunzima bezoqoqosho kunye nokulahleka okukhulu kolawulo. Mhlawumbi ininzi eyonakalisayo, nangona kunjalo, yilahlekelwa yikhundla. Ede ubukhulu bamandla aseMpuma ye-Asia, iMfazwe ye-Opium yokuqala yabonisa i-Qing China njengengumthi wephepha. Abamelwane, ngakumbi iJapan , baqaphela ubuthathaka babo.
I-Second Opium War
Ipeyinti esuka eLe Figaro yomlawuli waseFransi uCousin-Montauban ekhokela ukuhlawulwa ngexesha leMfazwe yesiBini se-Opium e-China, ngo-1860.
Emva kweMfazwe ye-Opium yokuqala, izikhulu zaseKing zamaTshayina zanqwenela ukunyanzelisa imigaqo yeeNgqungquthela zaseBrithani zaseNanking (1842) kunye neBogue (1843), kwakunye nezivumelwano ezingafaniyo ezingafaniyo ezibekwe yiFransi ne-United States (zombini ngo-1844). Ukwenza izinto zibe zibi nakakhulu, iBrithani yafuna ukunikezelwa kwamanye amazwe kumaTshayina ngo-1854, kuquka ukuvulwa kwamachweba aseChina kumazwe amashishini angaphandle, i-0% yentlawulo kwi-British importation, kunye nokusemthethweni kwezorhwebo yaseBrithani e-opium esuka eBurma naseIndiya ukuya eChina.
I-China yazibamba ezo ntshintsho kwixesha elithile, kodwa ngo-Oktobha 8, 1856, iindaba zafika entloko kunye neNgehlakalo yeArrow. Umlambo wawukhuphe umkhombe obhaliswe kwiChina, kodwa usekelwe ngaphandle kweHong Kong (emva koko i-colony yaseBrithani ikoroni). Xa amagosa aseTshayina angena kuloo nqanawa waza wabamba abantu abalishumi elinesibini ngokumangalisa ukukhwabanisa nokugqithisa, iBritish yabonisa ukuba inqanawa yaseHong Kong yayingaphandle kwegunya laseChina. IBrithani yafuna ukuba iChina ikhulule abasebenzi baseTshayina phantsi kwesigatshana esingaphandle kweSivumelwano saseNanjing.
Nangona abaphathi baseTshayina babelungele amalungelo abo ukuba bafikelele kwiArrow, kwaye ngokwenene ukubhaliswa kwe-ship yaseHong Kong kwaphelelwa yisikhathi, iBrithani yabanyanzelisa ukuba bakhululwe abo basolwandle. Nangona iChina yathobela, iBritish yabhubhisa ezine ezineentonga zaseNtshonalanga zaza zawa ngaphaya kwama-junks angama-20 phakathi kwe-Oktobha 23 noNovemba 13. Ukususela kwiChina kwimeko yebuvukeli beTaiping ngelo xesha, yayingenamandla amaninzi empi ukukhusela ulongamo lwalo kulutsha olutsha lwaseBrithani.
I-Britani yayinezinye iinkxalabo ngelo xesha, nangona kunjalo. Ngowe-1857, i- Indian Revolt (ngamanye amaxesha ibizwa ngokuba yi "Sepoy Mutiny") isasazeka ngaphesheya kwe-Indian subcontinent, ikhupha iNgqobhoko yaseBrithani kude neChina. Emva kokuba i-Revolt yaseNdiya yachithwa, nangona kunjalo, uMbuso weMughal wagqithiselwa, iBrithani yaphinde yajonga amehlo kwiQing.
Ngelo xesha, ngoFebruwari ka-1856, umvangeli waseFransi ongumKatolika ogama lakhe linguAugust Chapdelaine wabanjwa eTxixi. Wayekwalelwa ngokushumayela ubuKristu ngaphandle kweechwepheni, ngokuphula izivumelwano zeSino-French kunye nokusebenzisana nabavukeli baseTaiping. UBawo Chapdelaine wagwetywa ukuba ahlasele, kodwa abanjwa bakhe bambetha waze wafa ngaphambi kwesi sigwebo. Nangona umthunywa wevangeli wasetyenzwa ngokubhekiselele kumthetho weTshayina, njengoko kulungiselelwe kulo mnqophiso, urhulumente waseFransi uza kusebenzisa esi siganeko njengesizathu sokujoyina iBrithani kwi-Second Opium War.
Phakathi kukaDisemba ka-1857 naphakathi kwe-1858, amabutho ase-Anglo-aseFransi athatha i-Guangzhou, i-Guangdong kunye neTaku Forts kufuphi neTiquin (Tianjin). I-China yanikezelwa, kwaye yaphoqelelwa ukuba isayine iSivumelwano Sesiyalo seTyentsin ngoJuni ka-1858.
Esi sivumelwano esitsha savumela i-UK, iFransi, iRashiya kunye ne-US ukuseka amagosa aseburhulumenteni ePeking (eBeijing); livule izibuko ezongezelelweyo ezilishumi elinanye ukuya kubahwebi belizwe langaphandle; kwakha ukuhamba ngokukhululekile kweenqanawa zangaphandle kumlambo waseYangtze; yavumela abantu basemzini ukuba bahambe bangene ngaphakathi kweTshayina; kwaye kwakhona iChina kwafuneka ihlawule izibonelelo zemfazwe-ngoku, iipilisi eziyi-8 zezilivere zesiFilimu naseBritani. (I-tael enye inokulingana nama-gram angama-37.) Kwintlangano eyahlukeneyo, iRashiya yathatha ibhankini lasekhohlo laseMurlam esuka eChina. Ngowe-1860, amaRashiya aya kufumana isixeko esikhulu sasePasifike kwisixeko saseVladivostok kule ndawo esanda kuzuza.
Nangona i-Second Opium War ibonakala iphelile, abacebisi be-Xianfeng Emperor baqinisekisile ukuba bayamelana namagunya asentshona kunye neemfuno zabo ezingummangaliso. Ngenxa yoko, uMlawuli waseXianfeng wenqaba ukuvumelanisa umnqophiso omtsha. Umqabane wakhe, i-Concubine Yi, yayinamandla ngokukodwa kwiinkolelo zakhe ezichasayo; ekuhambeni kamva abe nguMpress Dowager Cixi .
Xa amaFrentshi naseBrithani azama ukuhlawula amabutho emikhosi anamawaka e-Tianjin, kwaye ahambe eBeijing (ekuthiwa nje ukuseka ii-ambassas zabo, njengoko zichazwe kwiSivumelwano saseTyentsin), ekuqaleni ekuqaleni amaChina awazange avumele ukuba bafike emanzini. Nangona kunjalo, i-Anglo-French ibutho yenza umhlaba kwaye ngoSeptemba 21, 1860, wasula umkhosi we-Qing we-10,000. Ngo-Oktobha 6, bangena eBeijing, apho baphanga baze bawutshisa i-Pairs of Summer Palace.
I-Second Opium War ekugqibeleni iphelile ngo-Oktobha 18, 1860, ngokuqinisekiswa kweShayina kwinguqulelo ehlaziyiweyo yeSivumelwano saseThianjin. Ukongezelela kumalungiselelo adweliswe apha ngentla, isivumelwano esihlaziyiweyo sigunyazwe unyango olulinganayo lwesiShayina esaguqukele ebuKristwini, ukuqinisekiswa kweentengiso ze-opium, kunye neBritani nazo zafumana iindawo eziselunxwemeni yaseKowloon, kwilizwe lonke elivela eHong Kong Island.
Iziphumo zeMfazwe yesiBini se-Opium
Kwi-Qing Dynasty, iMfazwe yesiBini se-Opium ibonakalise ukuqala kwephuka elincinci ekugqibeleni eligqityiweyo ngokugqitywa kuka-Emperor Puyi ngo-1911. Inkqubo yamandulo yaseKinayi yayingayi kutshabalalisa ngaphandle kokulwa. Amanyano omnqophiso kaMianjin ancedisa ukukhusela i- Boxer Rebellion ye-1900, ukuvukela okuvelele ukuhlasela kwabantu bangaphandle kunye neengcinga zangaphandle ezifana nobuKristu eChina.
Ukutshatyalaliswa okwesibini kweTshayina ngamagunya asentshona kwaye kwanika isityhilelo kunye nesilumkiso eJapan. Amaxesha aseJapan ayekade ekhanyela ubukhulu baseChina kuloo mmandla, ngamanye amaxesha anika umvuzo kubakhweli baseTshayina, kodwa ngamanye amaxesha angafuni okanye ahlasele umhlaba. Ukuqulunqa iinkokheli eJapan kwambona i-Opium Wars njengengqungquthela yokulumkisa, eyamnceda ukuvuselela iMeiji , ngokutsha kwayo kunye nokulwa kwelizwe lesi siqithi. Ngomnyaka we-1895, iJapan yayiza kusebenzisa umkhosi wayo omtsha, wesentshona ukulwa neChina kwiMfazwe yaseSino-Japanese kwaye ihlala kwiPeninsula yaseKorea ... iziganeko eza kuba neempembelelo kwikhulu lemashumi mabini.
Attila i-Hun Portraits
I-French Revolution Timeline: 1795 - 1799 (iNcwadi)
Ukuhlaziywa: Ubugcisa be-Anarchy Album Kanye no-Scott Weiland kunye ne-Bumblefoot
Yenza ibhetri yePatato ukunika amandla i-LED Clock
Ukuchaza iGrafu yeTeing Ground, iMithetho Yakhe kunye ne-Etiquette
I-Classic Cheers ye-Cheerleaders
Ingcaciso Inkcazo kunye nemizekelo
Ngaba kufuneka ndisebenzise i-CO2 okanye i-Air Compress?
PHP Session_Start () Umsebenzi
Indlela i-FDR yatshintsha ngayo ukubonga
Yintoni iTonton ithetha ngesiNgesi?
I-Class-Tiered Class Class ye-Feudal Japan